Iwo Ekumusoro Ekushambadzira Matekiniki Ekutungamira Zera | Martech Zone
China, Kurume 20, 2014 Chitatu, Kurume 19, 2014 Douglas Karr
Takabata base nemutengi wekare nhasi asina kushanda nesu mugore rapfuura. Gore rakapfuura, makambani mazhinji aishandisa zviwanikwa zvedu nekuti isu taive pamberi peiyo nzira yekutsvaga yekushandisa Zvino, ndinotenda isu tiri kusundidzira vatengi vedu kuenda kumberi mumugwagwa kune vakapfuma zvemukati marongero uye kushambadzira otomatiki. Inomuka, tiri munzira chaiyo. Zvinoenderana naOracle Eloqua, tekinoroji, kushambadzira email, kumhanyisa uye zvakapfuma zvemukati ndiwo masimba anotyaira kumashure kweanonyanya kushambadza marongero ekushambadzira parizvino akaendeswa online.
Email inoonekwa seinonyanya kukosha kushambadzira kwedhijitari uye kudiwa kwekumhanyisa uye kukosha ndiwo matambudziko akanyanya, sekutaura kwaOracle Eloqua. Kutsanangura Yemazuva Ano Meter: Kubva Chaicho Kusvika Pfungwa. Chirevo ichi chinosimbisa nzvimbo dzinoverengeka dzakakosha dzinofanirwa kutariswa nevatengesi vekusarudza - uye kushomeka kunoshamisa kwevatengesi vemazuva ano pachavo. Zvemukati-zvakapfuma kushambadzira matekiniki, senge machena mapepa uye webhusaiti, zvakakosha kuchikamu chinotungamira uye kutungamira kusimudzira. Pamusoro pezvo, hunyanzvi hwekugadzira uye ruzivo rwekushambadzira tekinoroji zvakakosha zvakaenzana mumusika wemazuva ano.
Tags: Content Marketingdigital advertisingemutungamiri wechizvarwakutungamirira kutarisirakushambadzira tekinorojimushambadzi wazvinoOracle eloquawebcastmapepa machenavarungu
Kutengesa IN Zviri Mukati hakusi Kutengesa UYE Zvirimo
Mar 20, 2014 pa 11: 15 PM
Hapana mubvunzo kuti email ndechimwe chezvinhu zvakakosha zvekushambadzira zvemadhijitari.Kuve neyakajeka uye yakanangana neemail zano kwakakosha kune yako kushambadza musanganiswa; pasina zano rakanyatso tsanangurwa email yako kushambadzira ROI inogona kutambura.
Mar 24, 2014 pa 8: 18 AM
Hongu asi dzimwe nguva kana mushambadzi akasungirwa mari vanofanirwa kurega zvetsika nzira dzenguva refu vongo kusimudzira mari chaiyo…
Ini ndanga ndiri mune ino mamiriro uye kutaura chokwadi iyo yanga isiri iyo nguva yekufunga nezve ramangwana mabhenefiti erondedzero yekuvaka. Asi kana zvese zvakasikwa zvadzoreredzwa kudzoka muhurongwa ndozvakaitawo runyorwa chivakwa 🙂
Mar 24, 2014 pa 9: 29 AM
@MarketSecrets: disqus ndingadai ndichiri kusundidzira kunyoreswa kweemail. Kana iwe urikubhadhara kwenguva pfupi-matekiniki uye kuendesa vanhu kune yako saiti ... wadii kupa kunyoreswa kune avo vanogona 'kufarira' asi vasina kugadzirira kutenga izvozvi? Izvi zvinowedzera mari yako yenguva pfupi uye zvinokutendera kuti utundire mameseji kune avo vanonyorera pasi pemugwagwa.
Mar 24, 2014 pa 10: 01 PM
Ndine pfungwa yako Caleb, asi ndinobvumirana naDoug.
Mar 24, 2014 pa 8: 42 PM